TONTOLO IAINANA : Loza mitatao ho an’ny faritra Boeny ny fikaohan’ ny riaka ny nofon-tany
Nifanindra an-dalana ny fampianarana hamboly hazo izay azo avadika ho akora frandrehitra na ny saribao sy ny fikajiana ny sahan-driaka. 26 novembre 2018
Izay koa ny tanjon’ilay atrik’asam-paritra nandritra ny roa andro ho an’ny minisiteran’ny fambolena teto Mahajanga. Ny alarobia sy ny alakamisy 22 novambra teo no nahatontosana izany ho an’ireo ben’ny tanàna sy ireo vondron’olona ifotony na ny Voi, ary ireo tekinisianina mpisehatra no nomen’ny minisitera mpiahy ity fampiofanana natao teny aminy restaurant Kanto, La corniche teto Mahajanga. Andiany fahatelo ity atrik’asam-piofanana natao ity, ka ny hahatrarana ny tanjon’ny fampandrosoana arivo taona fahatelo na ny ODD, no fanambin’ireo mpikarakara, izay vatsian’ny banky alemana ho an’ny fampandrosoana na ny KFW vola.
Araka ny fantatra nandritra ny fihaonan-dRazafindravonjy Germain, mpandrindram-paritra ny PLE Boeny, tamin’ny mpanao gazety taorian’io atrik’asa io. Efa mananika ny 3200 hekitara amin’ny velaran-tany 5400 hekitara nanaovana fanamby no efa vita voly hazo amin’izao fotoana izao, izay ambara fa mbola hitohy hatramin’ny volana jona taona 2019 ny fandahara’asa ataon’ny PLE ao amin’ity tetik’asa iray ity. Ny vondron’ny tantsaha mifanome tanana amin’ireo rantsa-mangaikan’ny minisiteran’ ny fambolena eny ifotony no miara-manao tan-tsoroka amin’izany fanajariana ny sahan-driaka izany. Izao no atao dia mba hiarovana ny nofon-tany tsy ho raraka satria ahiana hiteraka fihontsahan’ny tany ka hiafara amin’ny fahatotoran’ireo tanimbary eny ambanivohitra rehetra eny, hoy hatrany ity mpandrindram-paritra ny tetik’asa ny PLE ity.
Loza mitatao ho an’ny Faritra Boeny, hoy hatrany ny fanazavany raha tsy amin’ izao vanim-potoan’ny maitso ahitra izao dia mifanome tanana ny rehetra. Ny distrikan’i Mahajanga II sy Marovoay ary Ambato Boeny no nahazo tombony amin’izao tetik’asa fikajiana ny tontolo iainana izao, ary mbola hisandrahaka amin’ireo distrika hafa raha mila tosika amin’ny fanajariana ny nofon-tany koa. Nanentana ny rehetra ny tenany mba hiara- hiombon-tsaina amin’ ity ady atao amin’ny fiarovana ny nofon-tany ity, ka samy handray ny manandrify azy, toy ny fambolen-kazo isan-taona fa amin’ny vanim-potoan’ny fahavaratra na ny maitso ahitra izao.